I-Master ehlanzekile Lungiselela imemori | Kusuka kuLinux
I-Master ehlanzekile Lungiselela imemori
I-Master ehlanzekile iyi- isikhumbuzi sememori lokho kuzokusiza ugcine idivayisi yakho ihlanzekile kunoma yimaphi amafayela angenamsoco.
Ngaphandle kokwazi noma ukungazi, lapho sibheka i-inthanethi kusuka kumakhalekhukhwini wethu noma lapho senza imisebenzi ethile, bakhiqiza amafayela angenamsoco agcwalisa inkumbulo yethu kancane kancane, okwenza ukusebenza kweselula yethu kuhamba kancane, kepha ngenxa ye-Clean Master, thina ingalungisa le nkinga.
I-Master ehlanzekile iyi- Uhlelo lokusebenza lwe-Android ehlola inkumbulo yeselula yakho, bese ikhombisa ukuthi ingaqeda ukwenza ngcono ukusebenza kwayo, futhi ingakusiza ukumisa imisebenzi engemuva, ngale ndlela inkumbulo ye-RAM yeselula yakho ikhululiwe ukuthi ikwazi ukuyinikezela kokunye imisebenzi ebalulekile.
Lolu hlelo lokusebenza lungalandwa mahhala ku-Google Play.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » I-Master ehlanzekile Lungiselela imemori
[UKUZITHOBA ... noma cha] Ukuhlangana kwama-inits ku-Debian: Impikiswano yokhetho (ingxenye yesibili)